Xaaladda Itoobiya Oo kacsan iyo Qaraxyo ka dhacay Adis Ababa. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xaaladda Itoobiya Oo kacsan iyo Qaraxyo ka dhacay Adis Ababa.
On Jul 1, 2020 539 0
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa ku waramaya in xaaladda dalkaas ay aad u kacsantahay, ka gadaal markii ay dalka ka billowdeen banaanbaxyo ballaaran oo ka dhashey dil loo geystay nin kasoo jeeda qowmiyadda Oromada.
Meelaha ugu badan ee ay bananabaxyada ka soconayaan waa magaalada Adis Ababa iyo magaalooyinka ku xeeran, waxaana jira gacan ka hadal dhexmaraya ciidamada amaanka iyo dadka dibad baxyada dhigaya ee careysan.
Magaalada Adis Ababa waxaa laga maqlay jugta qaraxyo saddex gaaraya oo aad u xoogan, kuwaas oo gilgilay bartamaha magaalada, waxaana ka dhashey khasaare kala duwan.
Masuul u hadlay booliiska wadanka Itoobiya wuxuu shaaca ka qaaday in qaraxyada ay ku dhinteen dad isuga jira shacab, ciidamo iyo dad uu ku tilmaamay iney iyagu aaseen qaraxyada gilgilay Adis Ababa.
Wakaaladda Reuters oo soo xiganeysa ilo ku sugan gudaha Itoobiya waxay xaqiijisay in qaraxyada iyo dibad baxyada weli soconaya ay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux, sidoo kalena ku dhaawacmeen inkabadan 80 ruux.
Sarkaal katirsan booliiska Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay Adis Ababa kadib is rasaaseyn dhexmartay ciidamada Booliiska iyo ilaalada gaarka ah ee siyaasiga Johwar Muxamad oo ah siyaasi u dhashey Oromada, diidanna siyaasadda Abey Axmed.
Guud ahaanba adeega Internetka ayaa ka go’an dalka Itoobiya, waxaana shirkad qaabilsan arimaha Internetka ay sheegtay in tallaabadan ay tahay tii ugu xumeyd ee soo marta Itoobiya, marka loo eego internetyada oo dhowr jeer horey loo jaray.
Banaanbaxyada hadda soconaya waxay soo billowdeen maalintii Talaadada, xilligaas oo ciidamada Itoobiya ay dileen siyaasi kasoo jeeda qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabo Hundiisa, kaasoo horey ugu xirnaa dowladda Itoobiya.
Ninkan ayaa caan ka ah qowmiyadda Oromada dhexdeeda, wuxuuna inta badan ka hadli jiray shirarka iyo dibad baxyada, isagoona ku dhiiragelin jiray qowmiyadda Oromada iney u doodo sidii ay ku heli lahayd xuquuqdeeda.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed oo hadlay ayaa ku tilmaamay Hundiisa inuu aha qof lab dhabar u ah dhalinyarada, dilkiisana uu ka xunyahay, shacabka Itoobiyana la gudboontahay iney is dejiyaan, isagoona ugu baaqay booliiska iney gacanta kusoo dhigaan cidii geystay dilka siyaasigaas Oromada u dhashey, ahaana qof heesaa ah.
Itoobiya waxaa ku nool qowmiyado aad u farabadan oo kala diin iyo hadaf ah, waxaana mid weliba ay tan kale u aragtaa cadowgeeda. inkastoo badi dadka ku nool Itoobiya ay yihiin dad muslimiin ah hadana talada iyo maamulka waxaa gacanta ku haya qowmiyadda Tigreega, waxaana aqoonyahanno badan ku tilmaamayaan Abey Axmed oo kasoo jeeda Oromada inuu yahay oo keliya maqaar saar, siyaasadda dalkana ay weli gacanta ugu jirto Tigreega.